बर्बाद भयो : नविना लामा « News24 : Premium News Channel
‘नेकपा एमाले भित्रको पनि गुटबन्दी बडो खतरनाक र कोभिड जस्तै नयाँ प्रकृतिको छ । किनभने आफ्नो पार्टीको सरकार ढलाएर अर्को पार्टीलाई सरकार बनायो । यो भन्दा दुख़त घटना के हुन सक्छ ?’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘बर्बाद भयो । जबज खाेइ ? हाम्रो यस्तो राजनीति ? हाम्रो पार्टीको राजनीति पनि पार्टी एमाले भोट अर्को अर्को पार्टी हो ?’